‘लोकस्टारले मेरो जग बसाइदियो’
पहिलो लोकस्टार हुँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ?
विजेता हुँदा त को खुशी नहोला र ? खुशीको सीमा नाघेको छ। आफूसँगै मलाई माया गर्ने देशविदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ र लोकगीतका स्रोताको पनि जीत भएको महसुस गरिरहेको छु।
बधाईको त ओइरो लागेको होला ?
नेपाल र नेपालबाहिर हुनेले मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउनुभयो। उहाँहरूले पनि आफूले मन पराएको मान्छेले, आवाजले जित्दा खुशी भएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। फेसबुक, म्यासेन्जर जताततै सबैले बधाई दिनुभएको छ। आगामी दिनमा संगीतमा लाग्ने शुभकामना पनि पाइरहेको छु। सबैको माया र साथले मलाई निरन्तर संगीतमा लाग्न प्रेरणा दिइरहेको छ।
रोल्पाबाट लोकस्टारको अडिसन हुँदै अहिले पहिलो लोकस्टार हुँदासम्म मैले धेरै अनुभव समेट्ने मौका पाएको छु। यो मेरो भाग्य र मेहनतसँगै मलाई माया गर्नेहरूको प्रगाढ प्रेमको परिणाम हो। त्यसैले आगामी दिनका लागि मेरो योजना मलाई माया गर्ने स्रोता, दर्शकको मन सधैँभरि जितिरहने छ।
भव्य नगद पुरस्कार पाउनुभएको छ। के–के गर्नुहुन्छ ?
आगामी दिनमा सांगीतिक करिअरमा मैले गर्ने खर्चमा यही पैसा प्रयोग गर्ने सोचेको छु। मिलेसम्म अलिकति समाजसेवा पनि गर्ने मनसाय छ।
लोकस्टारले तपाईंलाई खासमा के दियो ?
लोकस्टारमा आउनुअघिसम्म म गीतसंगीतको अनुयायी थिएँ, गाउने प्रयास गर्थें र गाउँथेँ। त्यो बेलादेखि नै संगीतमा केही गर्ने मेरो सपना थियो। आज लोकस्टारले मेरो जग बसाइदिएको छ, जहाँ उभिएर आफ्नो सपना पूरा गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्छु। यस कार्यक्रमले मेरो परिचय बनाइदिएको छ।